Soo saaraha Robot-ka alxanka Shiinaha Mig iyo Soo-saare | Yunhua
Mashiinka 'Robotic Metal Inert Gas (MIG) alxanka, oo sidoo kale loo yaqaan' Gas Metal Arc Welding '(GMAW), waa geedi socod heer sarre ah oo caadi ah oo ku lug leh quudinta silig si joogto ah dhinaca caarada alxanka kulul. Waxaa loo tixgeliyaa habka alxanka semi-otomaatig ah.
MIG alxanka waa mid ka mid ah noocyada ugu caansan ee alxamida ee codsiyada warshadaha waana hab fudud oo loogu midoobo nidaamka robot-ka. MIG alxanka ayaa bixiya hanaan ka dhaqso badan qaababka kale ee alxanka, gaar ahaan marka aaladaha la isku daro.
Robotyada alxanka ee MIG ayaa awood u leh dhammaan-boos, iyagoo ku daraya dabacsanaanta nidaamka alxanka. Badbaadada qiiqa halista ah, walxaha tayada sare leh iyo habab wax ku ool ah ayaa ah qaar ka mid ah faa'iidooyinka ay shirkaduhu u arkaan soo-saarka alxanka MIG.
Hawlaha isha koronto ee MIG
YOO robot robot wuxuu hadda ku xiraa alxamdadeyaal kala duwan, sumcadda Shiinaha: Aotai, Megmeet, Bingo, iwm. In ka badan badaha caanka caanka ah: OTC, EWM iwm Iyadoo alxamda sumcadda Shiinaha ah, u qaad Aotai tusaale ahaan, waxaad alxamayn kartaa waxyaabo badan oo kala duwan sida birta kaarboon, birta aan qallalanayn iyo aluminium, oo leh shaqaynta garaaca wadnaha, shaqooyinka kala daadsanaanta hoose iyo wixii la mid ah Khibrada farsamayaqaanada, Aotai welder oo leh YOO HEART robot hadda wuxuu la kulmi karaa min 0.5mm CS saxanka alxanka oo leh waxqabad aad u wanaagsan.
Shirkadda Yunhua waxay u soo bandhigi kartaa macaamiisha shuruudo kala duwan oo gaarsiin ah. Macaamiisha ayaa dooran kara habka rarka ee badda ama hawada iyadoo la raacayo mudnaanta degdegga ah. Kiisaska baakadaha ee 'YOO HEART' waxay la kulmi karaan shuruudaha xamuulka badda iyo hawada. Waxaan diyaarin doonaa dhammaan faylasha sida PL, shahaadada asalka, qaansheegta iyo faylasha kale. Waxaa jira shaqaale shaqadiisa ugu weyni tahay hubinta in aalado kasta oo ka mid ah la geyn karo dekedda kastamyada iyada oo aan wax dhibaato ah la helin 40 maalmood oo shaqo ah.
Q1. Mig robot alxanka loo isticmaali karaa alxanka Aluminium?
A. Robotka alxanka ee loo yaqaan 'Mig alxanka' waxaa loo isticmaali karaa birta Kaarboon, birta aan xarka lahayn, alxanka Aluminium. Farqiga u dhexeeya ayaa ah in robotku uu qaabeyn doono alxanle kala duwan si uu ula kulmo waxyaabo kala duwan.
Q2. Mig mashiinka alxanka miyaa isku xiri kara alxamid kale oo nooc ah?
A. Robot-ka alxanka ee loo yaqaan 'Mig alxamida' wuxuu isku xiri karaa alxamda kala duwan sida OTC, Lincoln, Aotai, Megmeet iwm. Macaamiisha ayaa sameyn doona naftooda haddii ay u baahan yihiin alxan kale oo nooc ah.
Q3aad. Mig mashiinka alxanka ma xiri karaa dhidibka dibedda?
A. Robotka alxanka ee Mig wuxuu isku xiri karaa dhidibka dibedda. 3 dhidibka dibedda ka badan ayaa lagu xidhi karaa oo axisyadan waxay la shaqeyn karaan robot. Qalab badan ayaa lagu xiri karaa iyada oo loo marayo PLC, robot ayaa ku xakamayn doonta iyaga oo u diraya oo u helaya calaamadaha iyada oo loo marayo guddiga I / O.
Q4. ma fududahay in la barto robotka barnaamijyada?
A, aad u fudud in la barto, kaliya waxay u baahan tahay 3 ~ 5 maalmood, shaqaale cusub ayaa garan kara sida loo aalado robotka.
Q5. Miyaad bixin kartaa xalalka alxanka ee dhammaystiran?
A. haddii aad bixin karto faahfaahin ku saabsan qaybta shaqada, Farsamayaqaankeennu wuxuu kuu qorsheyn karaa xalal dhammaystiran adiga. Waxaan ka qaadi doonaa 1000 USD naqshad kasta oo xal ah.
Hore: Robot alxanka TIG
Xiga: Robot alxanka Laser